VLC Player waa ciyaaryahan si aad ah loo isticmaalo, iyo encoder taageera video badan iyo qaabab audio. Sida software kale, dadka isticmaala VLC la kulmi karaan dhibaatooyin farsamo oo kala duwan. Inkastoo ayaa lagu rakibay on your computer muddo dheer oo aad horay u isticmaalaan marar badan, waxaa dhici karta in uu si sax ah u shaqeeyaan. Mid ka mid ah dhibaatooyinka caanka ah farsamo aad xooggaaga oo inta badan waayo-aragnimo waa VLC codka lahayn. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha loo caawiyo in aad xal u VLC dhibaatada codka lahayn.
Xalka 1: Unmute Your VLC Player
Solution 2: Dheellitir Audio Settings
Xalka 3: Beddelaan Video Qaabka
Xalka 4: Switch si Media kale Player
Haddii media player VLC ciyaarayaa video laakiin ma ciyaaraha dhawaaqa, sababta ugu badan tahay waa in aad laga yaabaa in ay u dhigay in xidhi mar uun, iyo illoobay oo dhan ku saabsan. Nidaamka qalliinka aad computer ee waantoobaan goob iyo carrab la VCL marka xigta. Si unmute aad VLC, kaliya raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1 Click icon afhayeenka (waa hoose ee bar aad hawsha u dhow saacad) ah;
2 Click "fiicni" iyo haddii aad VCL Player waxaa socda, waxaa tusi doonaa in fiicni sida hoos ku qoran;
3 Markaasaa unmute VLC iyo codka mar kale ka shaqeeya
Xalka 2: Dheellitir Settings Audio
Haddii aysan u shaqeeyo ka dib marka aad unmute VLC, isku day inaad la qabsado goobaha audio ee ciyaaryahankaan. Waa kuwan sida: tagaan si ay Tools> rabtid> Audio iyo in la hubiyo loo sahlo audio waxaa laga. Markaa waa inaad aadaa Output iyo isku day default kala duwan.
Xalka 3: Beddelaan Qaabka Video
Haddii ay weli uma shaqeeyo ka dib markii isku dayaya xal kor ku xusan, waxaad badalo laga yaabaa video asalka inay qaab kale, maxaa yeelay, VLC laga yaabaa in ay dhibaatooyin ka ciyaaro qaar ka mid ah MKV ama MP4 file warbaahinta. Halkan waxaan ku soo bandhigi awood Video Converter inuu kaa caawiyo inaad ku beddelato file warbaahinta. Just raac tallaabo hoos ku qoran:
1: Download oo ay maamulaan video Converter this. Markaa waa inaad aadaa "Beddelaan" tab> "Add Faylal ay" si ay u dajiyaan aad files warbaahinta. Waxa kale oo aad si toos ah jiidi kartaa files deegaanka si ay barnaamijkan.
2: Markaas riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad dooro qaab aad rabto.
3: Hit ah "Beddelaan" button iyo bilowdo diinta aad files warbaahinta.
Hadda oo aad inta badan soo gaarto dhibaato farsamo oo marka la isticmaalayo ciyaaryahan VLC, sababta ay isku dayaan ciyaaryahan kale oo warbaahinta u ahayn? Wondershare Player noqon kartaa doorasho wanaagsan. Waa ciyaaryahan xoog badan warbaahinta iyo FREE iyo taageerada tiro balaadhan oo ah video iyo maqal ah qaabab sida AVI, MP4, FLV, MOV, AVCHD, wmv, MKV, M4V, MTS, M2TS, VOB, MP3 iyo wixii la mid ah. Sidaa daraadeed, uma baahnid inaad si loo soo dajiyo kasta oo codecs dheeraad ah ama ciyaaryahan u ciyaaro files warbaahinta aad. Just jiidi-n-hoos u faylasha aad barnaamijka iyo la kulmaan Raaxo tiyaatarka-sida. Hadda download kaliya ciyaaryahankaan warbaahinta smart oo la tirtiro dhibaatada codka dhibsado!
> Resource > VLC > VLC Player No Sound Solution